Ukuxhamla - Ukunyaniseka koLungiso nolwimi
Ubuxoki boLungelelaniso nolwimi
Igama lobuxoki :
Amanye amagama :
Inkcazo yoBungqina / ukuxhamla u-Fallacy
Ubugqwetha bokuFundiswa bufana kakhulu ne- Equivocation Fallacy , ngaphandle kokuba kusetyenziswe igama elilodwa kunye nokutshintsha intsingiselo yalo ngeengxabano, kubandakanywa ukuthatha igama ngokusetyenziswa okuqhelekileyo nokunika ukusetyenziswa okungavumelekanga.
Ngokukodwa, ukuFunanisa kubandakanya ukuchaza into okanye ubukho bokwenene ngokwakhiwa kwengqondo okanye iingcamango.
Xa iimpawu ezifana nomntu zithathwa ngokunjalo, sinokuthi sibe ne-anthropomorphization.
Imizekelo kunye neNgxoxo yokuQinisiswa / ukuHlanganisa i-Fallacy
Nazi ezinye iindlela apho ubuxoki bokuhlaziywa buya kwenzeka kwiingxabano ezahlukeneyo:
1. Urhulumente unezandla kumntu wonke umntu kunye nomnye kwipokotho lomntu. Ngokunciphisa ukhetho lwekarhulumente olunjalo, sinokuyinqanda ukukhupha kwayo inkululeko.
2. Andikholelwa ukuba indalo iya kuvumela abantu kunye nempumelelo yabantu ukuba bafe, ngoko kufuneka kubekho uThixo emva kokufa apho bonke baya kugcinwa khona.
Ezi ngxoxo zimbini zibonisa iindlela ezimbini ezahlukileyo zokusetyenziswa kobuNxibelelwano. Kwiingxabano zokuqala, umgaqo "urhulumente" uthathwa ukuba unempawu ezifana nomnqweno ohambelana nezidalwa zendalo, njengabantu. Kukho umgaqo ongaqhelekanga ukuba akuphosakele ukuba umntu abeke izandla zakhe ephaketheni lakho kwaye kugqitywa ukuba kukuziphatha okubi ukuba urhulumente enze okufanayo.
Oko le ngxabano engayithobeliyo kukuba "urhulumente" nje ukuqokelela abantu, kungekhona umntu ngokwakhe. Urhulumente akanayo izandla, ngoko awukwazi ukukhetha. Ukuba ukurhoxiswa koorhulumente kwabantu kungalunganga, kufuneka kungafanelekanga ngenxa yezizathu ngaphandle kokubambisana kunye nokukhetha.
Ukujongana nezo zizathu kwaye uhlolisise ukuqinisekiswa kwazo kuphazamiseka ngokubangela ukuphendulwa kwemvakalelo ngokusebenzisa isalathisi sokukhetha. Oku kuthetha ukuba nathi sinokwenkcenkceshela yoTyhefu loLwandle.
Kwimizekelo yesibini ngasentla, iimpawu ezisetyenziselwa ngabantu abaninzi, oko kuthetha ukuba lo mzekelo wokuphindaphinda unobuncwane. Akukho sizathu sokucinga ukuba "iphela", njenjalo, iyanyamekela nayiphi na into - kuquka nabantu. Ukuba ayinako ukunyamekela, ngoko inyaniso yokuba ayikhathaleli isizathu esisizathu sokukholelwa ukuba siya kusiphosa emva kokuba siphelile. Ngaloo nto, akuvumelekanga ukwakha ingxabano enengqiqo encike kwiingcinga zokuthi indalo iyakhathalela.
Ngamanye amaxesha abantu abangakholelwa kuThixo bangabangela ingxabano ngokusebenzisa lobu buxoki obufana nomzekelo # 1, kodwa luquka inkolo:
3. Inkolo izama ukutshabalalisa inkululeko yethu kwaye ngokokuziphatha okubi.
Kwakhona, unqulo alukho ukuthanda ngenxa yokuba akuyena umntu. Akukho nkqubo yenkolelo eyenziwe ngumntu inokuzama "ukutshabalalisa okanye ukwakha nantoni na. Imfundiso eyahlukeneyo yonqulo ngokuqinisekileyo iyingxaki, kwaye inyaniso ukuba abantu abaninzi benkolo bazama ukuphazamisa inkululeko, kodwa kucinga ukudibanisa.
Enyanisweni, ku funeka kuqatshelwe ukuba ukuhlaziywa okanye ukuhlengahlengiswa kuyenjalo nje ukusetyenziswa kwesichazo. Ezi zifanekiso ziba yimpazamo xa zithatyathwa kakhulu kwaye izigqibo ziyakhelwe ngesiseko sesalathisi. Kungaba luncedo kakhulu ukusebenzisa izifaniso kunye nezinto ezingabonakaliyo kwizinto esizibhalayo, kodwa zithwala ingozi yokuba siqale ukukholelwa, singenakuqonda, ukuba izinto zethu ezingabonakali zinempawu eziphathekayo esizibonisa ngazo.
Indlela esichaza ngayo into inempembelelo enkulu kwizinto esizikholelwayo ngazo. Oku kuthetha ukuba indlela esiyijonga ngayo inyaniso ihlala ihlelwe yilwimi esilisebenzisayo ukuchaza inyaniso. Ngenxa yoko, ukunyaniseka kokuhlaziywa kufuneka kusifundise ukuba siqaphele indlela esichaza ngayo izinto, hleze siqale sicinge ukuba inkcazelo yethu inomxholo obalulekileyo kunolwimi ngokwalo.
Ukuphikisana noMntu - iArgumentum ad hominem
I-Biography ye-Addison Mizner
"Connais-tu le pays" Iingoma kunye neNguqulelo Yombhalo
18 Ukuthanda Amantombazana Amantombazana Aphethwe Ngabantwana
Biography kaNorman Rockwell
UKENNEDY - Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
Funda Ingoma yokuzalwa yesiJamani
Isicatshulwa seSigqeba sokuThetha
Imigca ye-Epic yoLwazi oluvela kwi-Homeric Epic
Izibalo zeeYunivesithi zeRitgers